Mareykanka oo Madaxweyne Farmaajo ku booriyay inuu taageero Rooble | Dhacdo
Home Wararka Maanta Mareykanka oo Madaxweyne Farmaajo ku booriyay inuu taageero Rooble
Mareykanka oo Madaxweyne Farmaajo ku booriyay inuu taageero Rooble
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika, Molly Phee ayaa sheegtay inay maanta khadka teleefanka kula hadashay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayna ugu baaqday in la joojiyo hadalada xanafta leh iyo ficilada.
Waxay sheegtay inay Madaxweynaha ku adkeysay in ciidamada amniga ay tahay inay dhexdhexaad ka ahaadaan arrimaha siyaasadda.
“Maantay waxaan kala hadlay Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida degdegga ah ee loogu baahan yahay in la joojiyo hadalada xanafta leh iyo ficillada, waxaana carabka ku adkeeyay in ciidamada amnigu ay dhexdhexaad ka ahaadaan.” Ayay Molly Phee ku sheegtay qoraal caawa lagu daabacay barta xafiiskeeda ee Twitter-ka.
Waxa kaloo ay sheegtay inay Madaxweynaha ku boorisay in uu Ra’iisal Wasaaruhu ku garab istaago, sidii uu isugu yeeri lahaa Golaha Wadatashiga Qaranka, si degdeg ahna loogu soo dhameystiro doorasho leesla ogolyahay.
“Waxaan ku booriyay in uu Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku garab istaago, sidii uu Golaha Wadatashiga Qaran isugu yeeri lahaa iyo in si degdeg ah loo soo dhameystiro doorashooyin lagu kalsoonaan karo.” Ayay tiri Molly Phee.
Mar sii horeysay waxay khadka teleefanka kula hadashay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, oo ay kala hadashay xaaladda dalka, arrimaha amniga iyo doorashooyinka.
Mareykanka ayaa Madaxda Dowladda Federaalka ku cadaadinaya in laga gudbo khilaafka u dhaxeeya, si horey loogu dhaqaajiyo doorashada muranka iyo gaabiskaba uu hareeyay.
Previous articleMadaxweyne Qoorqoor oo la kulmay Safiirka Ingiriiska ee dalka, Kate Foster
Next articleRooble oo xilalka u kala wareejiyay Wasiirada Gaashaandhigga & Cadaaladda